Poritsaka Goavana Nahatonga Fanadihadiana Vaovao Amin’ny Fitaovam-Pitsikilovan’i FinFisher Miasa Ao Pakistan · Global Voices teny Malagasy
MpanoratraDigital Rights Foundation
Voadika ny 07 Septambra 2014 9:50 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français, čeština , 日本語, Español, English
Pikantsarin'ny pejy fandraisan'i FinFisher.
Nosoratan'i Sohail Abid, Digital Rights Foundation. Ny ôrizinalin'ity lahatsoratra ity dia navoaka ao amin'ny habaky ny Digital Rights Foundation.
Nisy manampahaizana manokana momba ny teknolojia iray tsy fantatra anarana nisovoka tao amin'ny lohamilin'ny FinFisher, ilay mpanao rindrambaiko malaza amin'ny fitsikilovana, tamin'ny fiandohan'ity volana ity. Nadikan'ilay mpisovoka avokoa ny ango-tahiry rehetra hitany tao amin'ny lohamilina ary navoakany tamin'ny endrika torrent. Hita ao amin'ity torrent manana hadiry 40Go ity avokoa ny ango-tahiry rehetra eo amin'ny vavahadim-pifandraisan'i FinFisher amin'ny hafa ka ao anatin'izany ny fifanoratana eo amin'ny mpanjifa sy ny mpiasan'ny orinasa. Hita ao ihany koa ny rindrambaiko rehetra amidin'ny orinasa, miaraka amin'ny tahirin-kevitra fampafantarana sy ny fitaovam-pampidirana azy anaty solosaina. Tamin'ny herintaona dia tafavoakan'ny mpanao fikarohana momba ny fiarovana ny porofo fa misy lohamilina mpibaiko sy mpanaramaso roa miasa ao Pakistan.
Inona moa ilay FinFisher?
Ratsa-mangaikan'ilay vondron'orinasa miorina ao Angletera antsoina hoe Gamma International ny FinFisher izay orinasa mivarotra amin'ny sampan-draharaham-panjakana rindrambaiko fanaraha-maso sy fitsikilovana. Ny rindrambaiko fototra, FinSpy, dia ampiasaina ahafahana miditra avy lavitra sy manara-maso solosaina na findain'olona tiana hotsikilovina. Manolotra fomba maro ahafahana mampiditra FinSpy ny orinasa, izay miainga amin'ny lakile USB tsotra mitondra rindrambaikom-pitsikilovana ho toy ny dosie ara-dalàna ka mamindra azy amin'ny solosaina iray rehefa misy ny fitrohana dosie. Ny karazam-pitaovana FinFisher dia namboarina hanome alalana ny olona mividy ireny rindrambaiko ireo hiditra amin'ny imailaka, ny zotram-pivezivezena (historique) an'aterineto ary izay rehetra nataon'ireo “lasibatra”, voambolana ilazana ireo olona tsikilovina.
Mpanjifan'i FinFisher ve I Pakistana?
“Amin'ny masony ihany,” Citizen Lab.
Eny ny valiny raha tarafina. Ny vondrona mpikaroka ao amin'ny Oniversiten'i Toronto Citizen Lab no namoaka tatitra tamin'ny herintaona nahatsikaritra lohamilina mpibaiko sy mpanara-maso FinFisher roa ao amin'ny tambajotran'ny Orinasam-pifandraisandavitra (PTCL), orinasan-draharaham-panomezana aterineto lehibe indrindra ao amin'ny firenena. Fa ity poritsaka vao haingana ity no manome antsika fampafantarana feno sy azo hakana tsoa-kevitra kokoa. Ny tahirin-kevitra niporitsaka teo amin'ny vavahadim-pandraisana no milaza amintsika fa nisy avy ao Pakistan nahazo lisansa rindrambaiko telo avy amin'ny FinFisher mandritra ny telo taona. Angamba ireo solosaina mampiantrano ny FinSpay mampiasa ny aterineton'ny PTCL ireo rafitra tsikaritry ny Citizen Lab ireo. Manana antony izahay ilazana fa tsy tafiditra amin'ity raharaha ity ny PTCL. Ka rehefa tsy ny PTCL, dia iza? Mety ho azo tondroina daholo saingy tsy mivarotra ny rindrambaikony afa-tsy amin'ny governemanta sy ny sampam-pitsikilovana ihany ny FinFisher — ka izay no ahafahana milaza fa iray amin'ireo sampam-pitsikilovana maro misy ao amin'ny governemanta pakistaney no mampiasa azy.
Nanatsoaka tahirin-kevitra avy ao amin'ny vavahadim-pandraisan'ny FinFisher ahitana ny fangatahan'olona iray (notondroina ho “Mpanjifa 32″) ao Pakistan tamin'ny orinasa izahay, mpanjifa nitaraina fa tsy voavaha tamin'ny alalan'ny Skype ny olan-dry zareo. Azonay vinaniana amin'izany fa ny Skype no lalana voalohany hanampian'ny FinFisher ara-teknika ny mpanjifany.
Pikantsarin'ny hafatra fangatahana fanampiana ara-teknikan'i FinFisher.
Inona no noviadiana?
Raha niainga avy amin'io angom-baovao io izahay dia nijery lalindalina kokoa izay novidian'i Mpanjifa 32 sy ny taratasim-pifandraisany tamin'ny ekipan'ny FinFisher ary nahita fa tsy iray ihany fa telo ny rindrambaikom-pitsikilovana novidiany. Ny rindrambaiko voalohany, FinSpy, dia nampiasaina hijerena ireo olona “mifindrafindra monina, mampiasa fifandraisana miafina sy sora-miafina ary monina any amin'ny firenena ivelany.” Rehefa tafapetraka ao amin'ny solosaina iray na amin'ny finday iray ny FinSpy, araka ny bokikely momba ny vokatra, dia “afa-manaramaso sy miditra ao aminy isaky ny miditra aterineto na tambajotra”.
Ankoatra ny FinSpy, ilay Customer 32 dia nividy rindrambaiko iray hafa ihany koa antsoina hoe FinIntrusionKit ahafahana mitsofoka amin'ny alalan'ny tambajotra wifi-n'ny hotely, seranam-piaramanidina na hafa “amin'ireo fitaovana mampiasa WLAN eo akaiky sy mandrakitra ny fifamoivoizan-tserasera sy tenimiafina”, mitrandraka “solonanarana sy tenimiafina (eny fa na dia amin'ireo sehatra mitondra sora-miafina TLS/SSL aza),” ary “manapika sary SSL ireo tahirin-kevitra voaafin-tsoratra tahaka webmail, vavahadin-dahatsary, tahirinkevitra an-tseraseran'ny banky ary maro hafa koa.” Ny rindram-baiko fahatelo dia miorina amin'ny fitaovana USB efa mitondra ilay rindrambaiko fa izay rehetra mampiasa azy dia lasa voatsikilo an-tserasera avokoa.
Ahoana ny Fampiasan'i Pakistan ny FinFisher?
Avy amin'ny fitarainana nofenoin'ilay Mpanjifa 32, dia hitanay ihany koa fa na iza na iza ilay ao Pakistan mividy FinFisher, ohatra, dia mampiasa azy ny antontan-kevitra MS office hitsikilovana, indrindra fa ny dosie PowerPoint. Alefan'ilay olona any amin'izay tiany hitsikilovana avy eo ilay dosie. Rehefa manokatra ireo antontan-kevitra mitondra FinFisher ireo tsy amin'ahiahy avy eo ny lasibatra dia lasa voaara-maso ho azy, amin'ny antsipirihan'ny mailaka, karajia, ary ireo zavatra hafa rehetra ataony izy ary miverina any amin'ny Mpanjifa 32 ireo antsipirihan-javatra rehetra ireo.
Mampiasa ny FinFisher ihany koa ny Mpanjifa 32 hangalarana milamina ny dosie ao amin'ny solosainan'ireo “lasibatra”. Ny dosien'ireo lasibatra dia azon'ny Mpanjifa 32 vakiana avokoa saingy mbola mitady zavatra hafa maro kokoa i Mpanjifa, araka ny asongadin'ny fangatahana ho fanampiana azy ara-teknika, izay mivaky toy izao: “ahafahan'ny mpiasa mifantina ny dosie hotrohina na dia tsy miserasera aza ny lasibatra, ireo dosie ireo dia azo trohina tsy misy fihetsika idiran'ilay mpiserasera.”
Raha fantatsika ary fa miasa ao Pakistan ny FinFisher, dia maro ny fanontaniana tsy voavaly. Amin'ny mahaolompirenena ao anaty fanjakana demokratika antsika,dia zontsika ny mahalala hoe iza no mampiasa rindrambaikom-pitsikilovana ao Pakistan, ohatrinona ny volam-bahoaka lany nahazoana ireo lisansa ireo, ary inona ny lalàna sy fitsipika narahina hametrahana ireo fitaovana rindrambaiko ireo.
Sohail Abid dia manao fikarohana momba ny olana ateraky ny fiarovana, fitsikilovana ary ny sivana ao amin'ny Digital Rights Foundation. Mialoha ny nidirany tao amin'ny DRF, dia tompon'andraikitra ara-teknika ao amin'ny Jumpshare, orinasa kely (startup) mpizara dosie avy ao Pakistana izy.